Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Qaxootiga ee Xagardheer oo Lagu Qabtay Xuska Sanadgurada 31aad ee ONLF.
Xerada Qaxootiga ee Xagardheer oo Lagu Qabtay Xuska Sanadgurada 31aad ee ONLF.
Posted by ONA Admin	/ August 23, 2015
Maanta ooy taariikhdu ku beegnayd 23/8/2015 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Faafi laga xusay sanadguuradii 31aad ee kasoo wareegtay aas’aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO oo la unkay 15/8/84. Waxaana xafladan soodiyaarinteeda iyo abaabulkeedaba kusoo farayaraystay maamulka Faraca Iftin oo kaashanaya Allaah S.W waxaana kasoo qayb galay dhamaan xubnaha Faraca Iftin, gudiga guud ee xerada, macalimin, ururada bulshada, iyo wufuud ka kala socotay Ifo iyo Gaarissa.
Waxaa iyaguna goobjoog ahaa qaar kamid ah saxaafada halganka iyo saxaafada caalimiga ah. Ugu horaynba waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soojeediyay Sheekh
Maxamad Irshaad oo ah Gudoomiyaha ururka culimo owdiinka ogadenia. Sheekha oo cabsida allaah dadka xasuusiyay ayaa ku dheeraaday jihaadka iyo fadiiladiisa wuxuuna kubaaqay in laga faa’iidaysto darajooyinkaas
uu Allaah bixinayo. Waxaa lagudagalay xafladii oo lagu furay taariikh aad u dheer oo uu akhriyay halgame C/raxmaan Faarax Barkhadle oo run ahaantii sifiican u ifiyay sooyaalka taariikheed ee shacabka soomaalida Ogadenia.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay Axmad Sheekh Xuseen oo madasha ka akhriyay warbixin kubaxaysay luuqada Carabiga oo kahadlaysay dhibaatooyinka iyo xasuuqa ay ciidanka gumaysigu ku hayaan shacabka birimagaydada ah ee Soomaalida Ogadenia. Waxaa isna khudbad dheer oo luuqada ingiriiska (English) kubaxaysay soojeediyay Aamin Dheere oo kamid ah dhalinta ururka OYSU ee Xagardheere waxayna khudbada aamiin kusaabsanayd guubaabo iyo
bogaadin uu usoo jeediyay dadwaynihii goobjooga ahaa iyo fariin uu udirayay kuwa xafladan kamaqanba.
Dhanka ale waxaa lagusoo dhaweeyay marti sharaftii oo aad ubadnayd waxaana lagusoo dhaweeyay Gudoomiyaha guud ee xerada qoxootiga Xagardheere mudane xuseen yuusuf wuxuuna gudoomiyuhu ugu horaynba umahadceliyay sooqaban qaabiyayaasha xafladan wuxuuna goobta kasheegay siduu utaageersanyahay halganka xaqa ah ee lagu xoraynayo dhulka Ogadenia sidoo kalana wuxuu qeexay taageerada iyo garab istaaga uu u hayo dadka ree ogadenia ee qoxootiga ku ah xerada uu gudoomiyaha kayahay ee xagardheere waxaana gudoomiyaha lagu siisagootiyay sacab
iyo sawaxan aad ubadan.
Waxaa isna lagu soodhaweeyay maamulaha dugsiga sare ee Xagardheere (Hagardere Secondery School) oo sifiican dhalinta S.ogadenia ee kudhaqan xeryaha qoxootiga ugu guubaabiyay waxbarashada isagoo tilmaamay haday wax bartaan ineey wax badan tarayaan dadka dhibaatada gumaysigu ay ku habsatay ee ree ogadenia. Dhanka kale waxaa lagusoo dhaweeyay odayaasha dhaqanka ee deegaanka caanka ka ah oo uu Hogaaminayay Gudoomiyaha guud ee Qoxootiga Ogadenia oday Daahir Maxamad Cali oo hal hal ugu soodhaweeyay odayaashii xaflada kasoo qayb gashay oo dhamaantood si aan kala hadhlahayn utaageeray shacabka S.ogadenia iyo halganka ay kujiraanba.
Sidoo kale waxaa sidiiran loogu soo dhaweeyay saraakiil katirsan gaashaan dhiga Ogadenia oo uu waxaana hadalka qaatay halgame Maxamuud Sooc oo runtii khudbad dhaxal gal ah goobta kasoo jeediyay wuxuuna sifiican ugu warbixiyay xaaladaha dhulka ogadenia. Waxaa isna guubaabo iyo talooyin dhaxal gal ah soo jeediyay N/hure Cabdulahi Xaashir oo mudo aad u dheer kusoo jiray halganka ogadenia. Dhinaca kale waxaa lagu soodhaweeyay wufuud ka kala timid Gaarissa iyo xerada Ifo waxaana hadalka qaatay gudoomiyaha Faraxa Ifo isagoo bulshada Dhagahooda ku shubay khudbad guubaabo iyo bogaadin u badnayd isagoo sheegay in ay muhiim tahay iskaashiga faracyada iyo guud ahaan dadka halganka wada.
Sidoo kale waxaa kalmadooda qaatay waftigii Gaarissa oo kala ahaa halgame carab oo ah xoghayaha OYSU Gaarissa iyo Halganto Fartuun Cabdikariim Sh Muuse oo labaduba ka tirsan Kooxda Heegan ee kadhisan Gaarissa waxayna dadkii dhiigooda kudhaqaajiyeen Heeso iyo Geeraaro dab ah oo lagu diirsaday waxayna madasha kasoo jeediyeen khudbado kookooban oo salaan iyo guubaabo u badnaa. Dhinaca kale waxaan meesha kamaqnayn qaar kamid ah hooyooyinka kahowlgala xerada waxaana hadalo dhiiri galin leh oo ay qiiro ku jirto soojeediyay labo hooyo kamid ah kuwa ugu magaca wayn dumarka S.ogadenia ee xagardheere. Waxaa isna lagu soodhaweeyay halgame Abwaan Xuseen oo katirsan jaaliyada Ogadenia ee kadhisan wadanka Maraykanka wuxuuna xuseen khudbadiisa xooga kusaaray dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada iyo saxaafada oo uu sheegay hadii intaas lehelo in lahelayo ogadenia oo xor ah insha allaah.
Guntii iyo kunaanadkii waxaa maslaxa lagu soodhaweeyay Kooxda caanka ah ee Kacaan oo ah mid miisaan kuleh dhinaca suugaanta halganka waxayna sidiiran umadadaaliyeen bulshadii soo buux dhaafisay madashii ay xafladu kasocotay waxayna soobandhigeen Riwaayad lajaanqaadaysa wayiga maanta iyo suugaan kala gadisan sida heeso iyo geeraaro. Galad eebe weeyee waxaa si nabad galiyo ah kusoo dhamaatay xafladii sanad guurada ee maanta lagu qabtay xerada Xagardheere waxayna soogabagabowday xili dambe oo maanta ah.